Ny slc mc nylon maharitra ela dia avo lenta sy mateza |
MC nylon slider dia manana fiainana serivisy lava kokoa noho ny vy, ary ny fanoherana entiny dia 3-7 heny noho ny vy karbonika sy vy tsy misy fangarony. Ny coefficient misy ny friksi dia kely, mandetika tena, fitaovana tsy misy fatorana, tanjaka misy fiatraikany lehibe, fananana mekanika feno, fanoherana asidra, fanoherana alkali, fanoherana ny harafesina masira, fanoherana ny fahanterana, fanoherana ny hafanana ambany, fahadiovana, tsy fanapoizinana ary lanja maivana . Fitaovana tena tsara ho an'ny fitehirizana fitaovana sy fitaterana fitaovam-pitaterana ...
anaran'ny vokatra:Mc nylon slider dingana:Famolavolana tsindrona / fanodinana centrifugal / machining CNC
1. Hery matanjaka mampitsindriana sy androm-piainan'ny fanompoana.
2. Izy io dia afaka miaro ny velaran'ny takelaka vy amin'ny ratra.
Fahaizana manome: Jereo ny volan'ny fividianana
Fampidirana Mc Nylon Slider
Mc Slider nylons dia namboarina ho lasa banga nylon, izay ahodina ho vokatra vita amin'ny alàlan'ny lathes, milina fanodinana ary fandriana osmium. Izy io dia vokatra haitao avo lenta izay navoakan'izao tontolo izao tamin'ny fomba mahery vaika tato ho ato. Polimeran'ny molekiola avo izy io. Toetra mekanika tsara McNylon vokatra manana matanjaka mekanika avo, henjana, fanoherana fiantraikany ary fanoherana ny havizanana, indrindra amin'ny fanoherana ny mikisaka tsara, mba hahafahan'izy ireo mahatanty ny enta-mavesatra mavesatra maharitra; Ny vokatra McNylon miaraka amin'ny faharetana tsara dia mety miondrika Tsy misy fiovana maharitra amin'ny endrika ivelany, izay afaka mitazona ny hamafin'ny fanoherana ny vaky nateraky ny enta-mavesatra niverimberina. Ity dia fitaovana mety tsara ho an'ny vokatra ampiasaina mba mahazaka ny enta-mavesatra be
Previous: Azontsika atao ny manome serivisy namboarina amin'ny crane nylon crane avo lenta amin'ny fomba isan-karazany sy ny masontsivana araka izay takiana
Manaraka: Nylon cushion miaraka amin'ny faharetana tsara sy ny toetra mekanika tena tsara
Slane nylon vano
Nylon cushion miaraka amin'ny fahaizany mivaingana sy exc ...